Fa Wo Werɛ Hyɛ Ahenni no Mu Pintinn | Adesua
“Gyidi ne awerɛhyem a yɛde twɛn biribi a yɛn ani da so.”—HEBRIFO 11:1.
Hwɛ asɛm a wɔato din “ Nea Onyankopɔn Bɛyɛ Ama N’atirimpɔw Abam” na kyerɛkyerɛ nea ɛdidi so yi mu.
Abraham apam ne Dawid apam.
apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek.
1, 2. Dɛn na ɛbɛtumi ama yɛanya awerɛhyem sɛ Onyankopɔn nam Ahenni no so bɛma n’atirimpɔw abam, na dɛn ntia? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
YƐN Yehowa Adansefo deɛ, ade a ɛda yɛn ano daa ne sɛ Onyankopɔn Ahenni nkutoo na ɛbɛyi yɛn haw afi hɔ. Nanso asɛmmisa no ne sɛ, ‘Yɛgye di paa sɛ Ahenni no wɔ hɔ, na Onyankopɔn nam so bɛma n’atirimpɔw abam? Adɛn nti na yɛbɛtumi de yɛn werɛ ahyɛ Ahenni no mu pintinn?’—Hebrifo 11:1.
2 Yehowa nam Mesia Ahenni no so bɛma nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama adesamma no abam. Ahenni no fapem yɛ den efisɛ ɛgyina nokwasɛm bi so. Ɛne sɛ Yehowa ne tumi nyinaa wura; ɔwɔ hokwan sɛ ɔdi tumi. Hena ne Ahenni yi so Hene? Henanom na wɔne Ɔhene yi bɛdi ade? Henanom na wɔbɛdi wɔn so, na wɔn tumi kɔdu he? Yehowa ayɛ apam ahorow na ɔnam so ma yɛnya nsɛmmisa yi ho mmuae. Saa apam ahorow yi yɛ ntam a Yehowa anaa ne Ba Yesu Kristo aka sɛ ɔbɛyɛ biribi. Sɛ yɛhwehwɛ apam yi mu a, yɛbɛhu ɔkwan a Yehowa bɛfa so ama n’atirimpɔw abam ne nea enti a yɛbɛtumi anya awerɛhyem sɛ Ahenni no tim hɔ daa.—Monkenkan Efesofo 2:12.
3. Dɛn na yɛbɛsusu ho wɔ adesua yi ne nea ɛdi hɔ no mu?
3 Bible ka apam atitiriw nsia bi ho asɛm, na ɛfa Mesia Ahenni no ho. Kristo Yesu ne Ahenni yi so hene. Apam ahorow yi ne (1) Abraham apam, (2) Mmara apam, (3) Dawid apam, (4) apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek, (5) apam foforo, (6) Ahenni apam. Momma yɛnhwɛ sɛnea apam no biara fa Ahenni no ho. Bio, yɛbɛhu sɛnea apam ahorow no bɛma atirimpɔw a Onyankopɔn de bɔɔ asase ne nea ɔbɛyɛ ama adesamma no aba mu.—Hwɛ asɛm a wɔato din “ Nea Onyankopɔn Bɛyɛ Ama N’atirimpɔw Abam.”
BƆHYƐ BI MA YƐHU SƐNEA ONYANKOPƆN ATIRIMPƆW BƐBAM
4. Sɛnea Genesis nhoma no kyerɛ no, nneɛma mmiɛnsa bɛn na Yehowa kae a ɛfa nnipa ho?
4 Yehowa bɔɔ asase no sɛ nnipa ntena so. Bere a ɔbɔɔ asase wiei no, ɔmaa nneɛma mmiɛnsa bi daa adi: (1) Onyankopɔn bɛbɔ nnipa wɔ ne suban so. (2) Nnipa bɛma asase ayɛ paradise na wɔawo mma asoɔmmerɛfo ahyɛ so ma. (3) Ɛnsɛ sɛ nnipa di papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no bi. (Genesis 1:26, 28; 2:16, 17) Bere a Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, na ɔpɛ sɛ wɔn asefo hyɛ asase so ma. Bio na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔremfa wɔn nsa nka papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no. Saa ahyɛde mmienu yi na na ɛbɛma Onyankopɔn atirimpɔw abam. Ɛnde, ɛyɛɛ dɛn na apam ho asɛm nso baa mu?
5, 6. (a) Ɔkwan bɛn so na Satan yɛe sɛ ɔbɛma Onyankopɔn atirimpɔw ayɛ kwa? (b) Dɛn na Yehowa yɛe wɔ atuatew a ɛsii Eden no ho?
5 Satan yɛe sɛ ɔbɛma Onyankopɔn atirimpɔw ayɛ kwa, enti ɔmaa nnipa tew atua. Ɔdaadaa Hawa ma ɔkɔtew papa ne bɔne ho nimdeɛ dua a Onyankopɔn abara no bi dii. Nea na Satan pɛ ara ne sɛ nnipa bɛbu Onyankopɔn mmara so. (Genesis 3:1-5; Adiyisɛm 12:9) Na ɔrepɛ akyerɛ sɛ Onyankopɔn nni hokwan sɛ ɔdi n’abɔde so tumi. Hiob bere so no, ɔde asɛm foforo bɛtwaam. Ɔkae sɛ nea nnipa bɛnya afi Onyankopɔn hɔ nti na wɔsom no.—Hiob 1:9-11; 2:4, 5.
6 Dɛn na na Yehowa bɛyɛ wɔ atuatew yi ho? Anka ɔbɛtumi asɛe atuatewfo no. Nanso Onyankopɔn yɛɛ saa a, anka asɛm a ɔkae sɛ Adam ne Hawa bɛwo ahyɛ asase so ma no remma mu. Yehowa ansɛe atuatewfo no, mmom ɔhyɛɛ nkɔm bi. Yɛbɛtumi afrɛ no Eden bɔhyɛ, na ɛho asɛm wɔ Genesis 3:15. (Monkenkan.) Ɛma yɛhu sɛ biribiara a Yehowa aka afa asase ne nnipa ho no bɛbam.
Eden bɔhyɛ no ma yɛhu sɛ biribiara a Yehowa aka afa asase ne nnipa ho no bɛbam
7. Dɛn na Eden bɔhyɛ no ma yɛhu fa ɔwɔ no ne n’asefo ho?
7 Yehowa nam Eden bɔhyɛ no so buu ɔwɔ no ne n’asefo kumfɔ. Ɔwɔ no ne n’asefo gyina hɔ ma Satan Ɔbonsam ne n’apamfo a wɔbɛsɔre atia Onyankopɔn tumidi. Onyankopɔn maa ɔbea no asefo tumi sɛ wɔnsɛe atuatewfo no. Enti Eden bɔhyɛ no ma ɛdaa adi sɛ Satan ne nea n’atuatew de aba nyinaa bɛfi hɔ. Bɔhyɛ no san kyerɛɛ ɔkwan a eyi bɛfa so aba.
8. Dɛn na yɛbɛtumi aka afa ɔbea no ne n’aseni no ho?
8 Hena na na ɔbɛyɛ ɔbea no aseni? Esiane sɛ Satan yɛ honhom na aseni no ‘bɛtu no agu’ nti, ɛda adi sɛ aseni no nso yɛ honhom abɔde. (Hebrifo 2:14) Sɛ aseni no yɛ honhom a, ɛnde na ɔbea a ɔbɛwo aseni no nso yɛ honhom mu ade. Bere rekɔ so no, ɔwɔ no ne n’asefo yɛɛ bebree, nanso na obiara nnim ɔbea no ne n’aseni no. Bere a Yehowa hyɛɛ nkɔm wɔ Eden no akyi bɛyɛ mfe 4,000 deɛ, na ɛda so ara yɛ ahintasɛm. Saa bere no, Yehowa ne nkurɔfo yɛɛ apam ahorow, na nkakrankakra ɛkyerɛɛ nea ɔbɛyɛ aseni no ne ɔkwan a Onyankopɔn bɛfa so ayi ɔhaw a Satan atuatew de aba no afi hɔ.
APAM A ƐMA YƐHU ASENI NO
9. Dɛn ne Abraham apam no, na bere bɛn na ɛfii ase yɛɛ adwuma?
9 Bere a Yehowa hyɛɛ nkɔm wɔ Eden akyi bɛyɛ mfe 2,000 no, ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔntu mfi ne kurom Ur nkɔ Kanaan asase so. (Asomafo Nnwuma 7:2, 3) Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ: “Fi wo man ne w’abusua mu ne w’agya fie kɔ ɔman a mɛkyerɛ wo no so; na mɛyɛ wo ɔman kɛse, na mehyira wo ama wo din ayɛ kɛse; na yɛ nhyira ma afoforo. Mehyira wɔn a wohyira wo, na mɛdome obiara a ɔdome wo, na wo nti asase so mmusua nyinaa benya nhyira.” (Genesis 12:1-3) Ɛbɔ a Onyankopɔn hyɛɛ Abraham yi na yɛfrɛ no Abraham apam no. Yɛnnim bere pɔtee a Yehowa ne Abraham yɛɛ apam yi. Nanso apam no fii ase yɛɛ adwuma 1943 A.Y.B. mu. Saa bere no na Abraham fii Haran twaa Eufrate Asubɔnten no; na wadi mfe 75.
10. (a) Dɛn na Abraham de kyerɛe sɛ ɔgye di paa sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ bɛbam? (b) Ɔbea no aseni ho nsɛm bɛn na Yehowa ma ɛdaa adi nkakrankakra?
10 Yehowa tĩĩ ne bɔhyɛ no mu kyerɛɛ Abraham mpɛn pii, na daa na ɔde biribi kakra ka ho. (Genesis 13:15-17; 17:1-8, 16) Na Abraham gye di paa sɛ Yehowa bɔhyɛ bɛbam; enti na wayɛ krado sɛ ɔde ne ba koro pɛ no bɛbɔ afɔre. Yehowa nso hyɛɛ apam no mu kena, na ɔsii so dua sɛ ɔkwan biara so ne bɔhyɛ bɛbam. (Monkenkan Genesis 22:15-18; Hebrifo 11:17, 18.) Bere a Yehowa ne Abraham yɛɛ apam no, nkakrankakra Yehowa maa ɔbea no aseni ho nsɛm pii daa adi. Ná aseni no bɛfi Abraham abusua mu, na na nnipa pii bɛba abɛka ne ho ne no adi hene. Wɔbɛsɛe Onyankopɔn atamfo nyinaa, na Onyankopɔn nam wɔn so bɛhyira nnipa pii.
Na Abraham gye di paa sɛ Yehowa bɔhyɛ biara bɛbam (Hwɛ nkyekyɛm 10)
11, 12. Ɔkwan bɛn so na Kyerɛwnsɛm no da no adi sɛ Abraham apam no mmamu kɛse bi wɔ hɔ, na dɛn na eyi kyerɛ ma yɛn?
11 Bere bɛn na Abraham apam no dii kan baam? Ɛyɛ bere a Abraham asefo nyaa Bɔhyɛ Asase no. Nanso na ɛnyɛ ɛno ara ne no, efisɛ Bible ma yɛhu sɛ saa apam yi de nhyira a ɛkyɛn saa koraa nso bɛba. (Galatifo 4:22-25) Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ Abraham aseni titiriw ne Yesu Kristo. Wɔn a wɔka ne ho ne Kristofo 144,000 a wɔasra wɔn no. (Galatifo 3:16, 29; Adiyisɛm 5:9, 10; 14:1, 4) Bere a Yehowa hyɛɛ bɔ wɔ Eden no, ɔkae sɛ ɔbea bi bɛwo aseni no. Saa ɔbea no ne Onyankopɔn ahyehyɛde no fã a ɛwɔ soro no. Bible frɛ saa ɔbea yi “Yerusalem a ɛwɔ soro,” na emufo yɛ honhom abɔde a wɔdi Yehowa nokware. (Galatifo 4:26, 31) Sɛnea yɛahu no, bere a Onyankopɔn ne Abraham yɛɛ apam no, ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔbea no aseni de nhyira bɛbrɛ adesamma afebɔɔ.
12 Abraham apam no too fapem maa ɔsoro Ahenni no, na ɛdaa no adi sɛ Ɔhene no ne ne mfɛfo adedifo bɛnya Ahenni no. (Hebrifo 6:13-18) Saa apam yi bɛyɛ adwuma akɔsi bere bɛn? Genesis 17:7 ka sɛ ɛyɛ “daa apam.” Ɛbɛyɛ adwuma kɔsi sɛ Ahenni no bɛsɛe Onyankopɔn atamfo na ɛde nhyira abrɛ asase sofo nyinaa. (1 Korintofo 15:23-26) Nokwasɛm ne sɛ nhyira a apam no de bɛba no bɛtena hɔ daa. Apam a Yehowa ne Abraham yɛe no da no adi sɛ Yehowa tirim a wabɔ sɛ ɔbɛma treneefo ‘ahyɛ asase so mã’ no bɛbam ɔkwan biara so.—Genesis 1:28.
APAM A ƐSI SO DUA SƐ AHENNI NO BƐTENA HƆ DAA
13, 14. Dɛn na Dawid apam no si so dua?
13 Eden bɔhyɛ no ne Abraham apam no ma yɛhu sɛ Yehowa tumidi wɔ nnyinaso titiriw bi. Ɛno ne ne trenee. Enti Mesia Ahenni a ɔde asi hɔ no nso gyina trenee so. (Dwom 89:14) Ɛnde, nkekae bi bɛtumi aba Mesia Ahenni no ho anaa? Bere bi bɛba a wɔbɛyi Ahenni no afi hɔ anaa? Apam foforo bi wɔ hɔ a ɛma yɛn awerɛhyem sɛ biribi saa rensi da.
Nkekae biara remma Mesia nniso no ho da, na ɛde nhyira a ɛnni awiei bɛba
14 Yehowa hyɛɛ tete Israel hene Dawid bɔ bi. Yɛfrɛ saa bɔhyɛ no Dawid apam. (Monkenkan 2 Samuel 7:12, 16.) Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ Mesia no bɛfi Dawid asefo mu na aba. (Luka 1:30-33) Afei deɛ na Yehowa rebue nneɛma so nkakrankakra ma nnipa ahu abusua a Mesia no bɛfi mu aba. Yehowa kae sɛ Dawid aseni yi na “ɛyɛ ne dea” sɛ ɔdi Mesia Ahenni no so Hene. (Hesekiel 21:25-27) Dawid ahenni no bɛtena hɔ daa efisɛ Yesu, Dawid aseni no, bɛtena hɔ afebɔɔ, na “n’ahengua bɛyɛ sɛ owia.” (Dwom 89:34-37) Yɛbɛtumi anya awerɛhyem sɛ nkekae biara remma Mesia nniso no ho da, na ɛde nhyira a ɛnni awiei bɛba!
APAM A ƐBƐMA YƐANYA ƆSƆFO
15-17. Sɛnea apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek kyerɛ no, dwuma foforo bɛn na aseni no bɛdi? Adɛn ntia?
15 Abraham apam no ne Dawid apam no sii so dua sɛ ɔbea no aseni no bɛyɛ ɔhene. Nanso ɛno nko ara rentumi mma adesamma nnya nea wɔhia nyinaa. Ɛsɛ sɛ ɔhene no san yɛ ɔsɔfo. Ɔsɔfo nkutoo na ɔbɛtumi abɔ afɔre ama nnipa ade wɔn ho afi bɔne ho na wɔabɛka Yehowa abusua kɛse no ho. Sɛnea ɛbɛyɛ a aseni no bɛyɛ ɔsɔfo no, Yehowa yɛɛ apam foforo. Eyi ne apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek.
16 Yehowa yii no adi kyerɛɛ Ɔhene Dawid sɛ ɔno ara ne Yesu bɛyɛ apam. Nneɛma mmienu na ɛwɔ apam yi mu. Nea ɛdi kan, Yesu ‘bɛtena Onyankopɔn nsa nifa,’ na wama no tumi de asɛe n’atamfo nyinaa. Nea ɛto so mmienu, Yesu bɛyɛ “ɔsɔfo kosi mmeresanten wɔ Melkisedek kwan so!” (Monkenkan Dwom 110:1, 2, 4.) Ɛnde, adɛn nti na ɛhia sɛ Yesu yɛ ɔsɔfo “wɔ Melkisedek kwan so”? Ansa na Abraham asefo renya Bɔhyɛ Asase no, na Melkisedek yɛ Salem hene ne “Ɔsorosoroni Nyankopɔn sɔfo.” (Hebrifo 7:1-3) Yehowa ankasa na ɔpaw Melkisedek sɛ ɔnyɛ ɔhene ne ɔsɔfo, na ɔno nkutoo ne onipa a na ɔyɛ ɔsɔfo ne ɔhene bere koro mu. Esiane sɛ Melkisedek anim ne n’akyi nyinaa obiara nni hɔ a ɔnyaa saa dibea mmienu yi bi nti, na ɛte sɛ nea ‘ɔdi sɔfo daa.’
Apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek no na Onyankopɔn nam so paw Yesu sɛ ɔnni sɔfo
17 Apam yi na Onyankopɔn nam so paw Yesu sɛ onni sɔfo, na ɔbɛyɛ “ɔsɔfo daa wɔ Melkisedek kwan so.” (Hebrifo 5:4-6) Apam yi ma yɛhu pefee sɛ Yehowa asi so dua sɛ ɔnam Mesia Ahenni no so bɛma atirimpɔw a ɔwɔ ma nnipa ne asase yi abam.
AHENNI NO GYINA APAM AHOROW SO
18, 19. (a) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ apam a yɛasusu ho no nyinaa fa Ahenni no ho? (b) Dɛn na yɛbɛsusu ho wɔ adesua a ɛdi hɔ no mu?
18 Bɛsi ha yi, yɛahu sɛ apam no mu biara ne Mesia Ahenni no wɔ twaka bi, na Ahenni no gyina apam ahorow so pintinn. Eden bɔhyɛ no si so dua sɛ Yehowa nam ɔbea no aseni so bɛma atirimpɔw a ɔwɔ ma asase ne nnipa no abam. Abraham apam no ma yɛhu sɛ aseni no ne Yesu ne wɔn a wɔasra wɔn no. Afei ɛboa ma yɛhu dwuma a wɔbɛdi.
19 Dawid apam no nso ma yɛhu abusua a Mesia no bɛfi mu aba ne ɛho nsɛm pii. Bio, apam yi ama Yesu kwan sɛ ɔnni asase so tumi na Ahenni no so nhyira ntena hɔ afebɔɔ. Apam a ɛbɛma yɛanya ɔsɔfo te sɛ Melkisedek no nso si so dua sɛ aseni no bɛyɛ ɔsɔfo. Nanso ɛnyɛ Yesu nko ara na ɔbɛma nnipa ade wɔn ho afi bɔne ne sintɔ biara ho ma wɔayɛ pɛ. Yehowa apaw nnipa bi sɛ wɔnkɔka Yesu ho nyɛ ahemfo ne asɔfo. Ɛhe na wɔfi? Yɛbɛsusu eyi ho wɔ adesua a ɛdi hɔ no mu.
Mesia Ahenni no: Ɛyɛ Onyankopɔn aban a Kristo ne Kristofo 144,000 a wɔasra wɔn no di so
Wɔn a Genesis 3:15 ka wɔn ho asɛm
Ɔbea no: Yehowa ahyehyɛde no fã a ɛwɔ soro; emufo yɛ honhom abɔde anokwafo
Ɔbea no aseni: Ɔbea no aseni titiriw ne Yesu Kristo. Wɔn a wɔka ne ho ne Kristofo 144,000 a wɔasra wɔn no. Ɔbea no asefo bɛsɛe Satan ne n’asefo pasaa
Ɔwɔ no: Satan Bonsam
Ɔwɔ no asefo: Honhom abɔde ne nnipa a wɔka Satan ho sɔre tia Onyankopɔn tumidi
Nea Onyankopɔn Bɛyɛ Ama N’atirimpɔw Abam
Eden bɔhyɛ no ma ɛda adi sɛ Onyankopɔn nam Ahenni no so bɛma atirimpɔw a ɔwɔ ma asase ne nnipa no abam. Apam nsia a ɛdidi so yi bɛma Onyankopɔn atirimpɔw aba mu:
WƆN A WƆYƐE: Yehowa ne Abraham
N’ATIRIMPƆW: Ɛno na ɛkyerɛ sɛ “ɔbea” a wɔaka ne ho asɛm wɔ Genesis 3:15 no “aseni” bɛdi ade wɔ Ahenni no mu
WƆN A WƆYƐE: Yehowa ne Israel man no
N’ATIRIMPƆW: Ɛbɔɔ “aseni” no ho ban, na ɛboaa nnipa ma wɔhuu Mesia no
WƆN A WƆYƐE: Yehowa ne Dawid
N’ATIRIMPƆW: Ɛkyerɛ sɛ Ɔhene Mesia bɛfi Dawid abusua mu na nhyira a Ahenni no de bɛba bɛtena hɔ daa
APAM A ƐBƐMA YƐANYA ƆSƆFO TE SƐ MELKISEDEK
WƆN A WƆYƐE: Yehowa ne Yesu
N’ATIRIMPƆW: Eyi na ɛkyerɛ sɛ ɔbea no “aseni” titiriw a ɔne Yesu bɛyɛ ɔhene ne ɔsɔfo daa
WƆN A WƆYƐE: Yehowa ne Kristofo a wɔasra wɔn
N’ATIRIMPƆW: Eyi ne nea Onyankopɔn gyina so gye Kristofo 144,000 a wɔasra wɔn no yɛ ne mma ma wɔbɛka Yesu a ɔyɛ “aseni” titiriw no ho
WƆN A WƆYƐE: Yesu ne Kristofo a wɔasra wɔn
N’ATIRIMPƆW: Ɛma Kristofo a wɔasra wɔn no nya hokwan sɛ wɔbɛka Kristo ho ne no adi ade sɛ ahemfo ne asɔfo wɔ soro